“Dalladii qaran ee dhallinyarada Sonyo waxay noqotay hadhuub shahksiyaad koobani ku adeegtaan” Warsaxaafadeed Wadani | Hangool News
“Dalladii qaran ee dhallinyarada Sonyo waxay noqotay hadhuub shahksiyaad koobani ku adeegtaan” Warsaxaafadeed Wadani
Hargeisa(HAN) Garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga WADDANI, ayaa maanta si adag u dhalliilay dallada dhallinyarada heer qaran ee SONYO, waxaana war-saxaafaddeed ay maanta si wada-jir ah u soo saareen ay ku sheegeen in dallada SONYO ay gebi ahaanba ka gaabisay hawlahii wax-qabad ee loo igmaday, iyaga oo tilmaamay in gebi ahaanba ay walaac xoogga ka muujinayaan xaaladda dhallinyarada Somaliland.
War-saxaafaddeedkan oo nuqul ka mid ahi na soo gaadhay, ayaa waxa uu u dhignaa sida tan:
War-Saxaafaddeed: SONYO Dallad dhallinyaradu ku hungawday.
Dalladii qaran ee dhallinyarada Somaliland waxay noqotay hadhuub shahksiyaad koobani ku adeegtaan, waxaanay ku milantay siyaasadda sumaysan ee xukuumadda Kulmiye iyadoo ka leexatay mabaadi’idii guud ee ay u asaasanayd. Fadhiidnimadeeda
waxa ka daran leexashada ay ka baydhay jidiikii sooyaalkii hore ay haysay dallada SONYO.
Kalfadhigii 32aad ee golaha sare ee dallada qodobadii kasoo baxay waxay markhaati u yihiin marin habawga dallada haysta, war-murtiyeedka dalladu soo saartay maaha mid taabanaaya baylahda iyo xaaladda nololeed ee ay ku jiraan dhallinyarada hoggaankoodu hagraday ee maalin iyo habbeen ku qulqulaaya badaha, iyo balwadaha. Iyadoo aynu ka wada dhergsanahay xaaladda nololeed ee dhallinyaradu ku suganyihiin waxa nasiib daro ah in maanta SONYO xasuusan waydo dhallinyaradii ay ahayd inay duruufahooda ka jawaabto.
Qodobada ay soo saartay Dallada SONYO kalfadhigeedii ugu danbeeyay waxay muujiyeen inay ka fogyihiin waayaha dhabta ah ee dhallinyarada Somaliland ku gedaaman. Biyo-dhaca qodobadaas oo dul meerayay Ajnadayaal aan shaqadoodi ahayn oo ahaa doorkii xukuumaddu qaadanlahayd. Dhallinyar ahaan waxaanu walaac xoogan ka muujinaynaa majare habawga ka muqada dallada SONYO. Qodobada kalfadhigan oo ahaa .
Isticmaalka Shillinka Somaliland
Qaadashada Kaadhka Muwaadinka
Baaq Ku Wajahan Taageerada Beesha Caalamka
Doorkii ay ahyd inay qaadto SONYO oo ahaa isku xidhka dhalinyarada, wacyigelinta dhallinyarada, shaqo abuurka iyo dhiirigelinta dhalliyarada, saddexdii sanno ee ugu danbeeyay waxaad mooda in dalldu aanay hayn hawlihii dhallinyarada ee ahaa mabaadi’deeda oo ay ku milantay siyaasadda Kulmiye ee aany ka badbaadin ururada bulshada rayidka ah. Dhallinyarada Somaliland dallada waxay magan uga yihiin inay ka shaqeeyaan baahiyahooda.
Waxaanu ku dardaaynaa dallada SONYO In magaceed mabda’eega,iyo manfaceedu noqdo u adeegida dhallinyarada oo aanay sii ahaan madal lagu muunad iyo maaldoonto oo madaxtooyada meermeerkedu macno u yahay.
Inay dalladu daacad ka noqoto xilka qaran ee ay u hayaan dhallinyarada oo ay la dareen wadaagan dhallinyarada u baahan in codkooda lagu hadlo oo laga jawaabo baylahaha kala ba’an ee ku xeeran mustqablkooda.